Fampielezan-kevitra : 200 000 fmg isan’olona…! -
AccueilSongandinaFampielezan-kevitra : 200 000 fmg isan’olona…!
Fampielezan-kevitra : 200 000 fmg isan’olona…!
Nisokatra omaly ny fampielezan-kevitra ho amin’ny fifidianana filoham-pirenena izay hatao amin’ny faha-7 Novambra ho avy izao. Samy nanana ny fomba nanamarihany izany ireo kandidà miisa 36, fa ny ankamaroany aloha dia namonjy Fiangonana niseho ho kristiana matahotra an’Andriamanitra…
Androany araka izany vao tena hiditra an-tsehatra mivantana amin’ny fampielezan-kevitra ireo kandidà: famoriam-bahoaka, fitetezana faritra, valandresaka sy dinidinika, sns. May volon-tratra tanteraka anefa ireo candida, mihevitra ny tenany ho “goavana” amin’ity fifidianana ity. Atao daholo ny fomba rehetra hisarihana olona hanatrika ny fampielezan-kevitra: fampisehoana maimaim-poana, fizarana “tee-shirt”, fividianana tsotra izao amin’ny alalan’ny fanomezana vola, fiantohana maimaim-poana ny fitaterana, sns. Ho betsaka amin’izy ireo anefa no ho tonga amin’ilay fomba fitenenana hoe “hojeren’ny havany eo”, ary tsy ho vitsy ireo ho takona tanteraka tsy misy mahita akory.
Tsy manana io olana sy tebiteby amin’ny fahavitsian’ny olona manatrika ny fampielezan-kevitra io mantsy ireo kandidà, heverina ho “kely”, izany hoe, ireo tsy manana fanantenana hahazo mihoatra ny 3%. Ireo kandidà mihevitra ny tenany ho isan’ny handray anjara amin’ny fihodinana faharoa no tena may volon-tratra nanomboka tamin’iny faran’ny herinandro iny. Ho sahirana tanteraka tokoa mantsy izay diso famindra amin’izao voalohany izao, ary tsy maintsy hisy akony amin’ny tohin’ny fampielezan-kevitra mandritra ny iray volana.
Raharahan’ny mpanam-bola moa ity fifidianana manaraka ity, mandainga izay milaza fa faharesen-dahatra noho ny programany, na koa noho ny zava-bitany no handrotsahan’ny vahoaka ny vatony. Miakatra mihitsy aza ny tolotra ankehitriny, ary efa misy sahy manonona vola hatrany amin’ny 200 000 fmg isan’olona amin’izao fotoana ho an’ny an-tanàn-dehibe sy ny renivohi-paritany. Izany hoe, raha hameno kianja mahazaka olona miisa 10 000 dia tokony manomana eo amin’ny 2 000 000 000 fmg (2 miliara) isan’andro, ankoatra ny karaman’ny artista, ny vary sy ny “tee-shirt”.
Miliardera daholo ireo kandidà goavana amin’ity fifidianana ity, izany hoe tokony mahazaka tsara izany 200 000 fmg isan’olona izany mandritra ny iray volana.
Faratsiho : Notohizana ny fanamboarana ny RN43
« Cocktail Molotov » tetsy amin’ny 13 mai : Tetika hanosoram-potaka ny mpitondra?